Author Topic: Karishma Manandhar - Photos and profile (Read 147198 times)
आफ्नै फिल्ममा करिश्माको भूमिका कमजोर, राजेश हमाल अतिथि मात्र
फिल्म नचलेर निराश हुँदै अमेरिका पलायन भएकी करिश्मा मानन्धर नेपाल फर्किएर एक दशकपछि फेरि फिल्म लिएर आउँदैछिन् । आफैले निर्माण गरेको फिल्म ‘फागू’ को हालै सुटिङ सकिएको छ । तर, फिल्ममा करिश्मा आफै निकै कमजोर भूमिकामा छिन् ।
सम्झना रौनियारको निर्देशन रहेको यस चलचित्रमा करिष्मा पति बिनोद मानन्धर पनि छोटो भुमिकामा देखिएका छन् । राजेश हमाल पनि अतिथि कलाकारका रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
‘करिष्मालाई सुहाउने भुमिका नै थिएन त्यही कारण उहाँ निमात्री मात्रै हुनु भयो ।’ निर्देशक रौनियारले अनलाईनखबरसँग भनिन् ।
फिल्म निर्माणको विषयमा कथा पनि पुरा नसुनी करिष्माले ओके गरेकी थिईन् । निर्देशक रौनियारको भनाई अनुसार एउटा ब्यबसायिक कलाकारमा हुनुपर्ने सबै गुण छ करिष्मामा ।
अलि अलि त हस्तक्षेप भयो होला नि ? सम्झना हाँस्दै भन्छिन् ‘सुटिङमा त सधै आउनुहुदैनथ्यो, के को हस्तक्षेप गर्नु ?’ करिष्मासँग बीस वर्ष अगाडी चिनाजानी भएपनि क्यामेराको उनीहरु आमन्ने समान्ने पहिलो पटक भएका हुन् ।
काठमाडांैमा आयोजना भएको दुईटा अवार्डमा भने सम्झनाले करिष्मालाई नचाएकी थिईन् । यसमा शिल्पा पोखरेल, गौरी मल्ल, सुभाष पराजुली, प्रमोद अग्रहरी लगायतको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
गौरीको भुमिका लामो छ भने गौरीलाई अभिनयको प्रस्ताव करिष्माले नै गरेकी थिईन् ।
karishma and kabita .jpg (74.53 kB, 696x808 - viewed 531 times.)
रमेशलाई करिश्माको साथ
अमेरिकाबाट फर्केको केही समयपछि बल्ल अभिनेता रमेश उप्रेतीले फिल्ममा अभिनयको मौका पाएका छन् । अमेरिकाबाट फर्केपछि कमब्याक गर्ने बिभिन्न बहाना खोजिरहेका रमेशले फिल्म 'ब्रासलेट'मा मुख्य अभिनेताको भूमिकामा पाएका छन् ।
यो फिल्मको घोषणा कार्यक्रम काठमाण्डौको एभरेष्ट होटलमा भयो । तर, रोचक कुरा त के भने फिल्म घोषणा कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर पनि उपस्थित भइन् । करिश्मालाई कार्यक्रम आयोजकले न त स्टेजमा लगे न त कुनै मन्तव्य नै दिन लगाए । तर, करिश्माको उपस्थिती यो कार्यक्रममा हुनुलाई विशेष तरबले हेरियो ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि रमेशलाई करिश्माले फिल्म क्षेत्रमा जमाउने तयारी गरिरहेकी थिइन् । जसका लागि उनले रमेशलाई धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ लगेको पनि देखिन्थ्यो । यतिमात्र होइन, दोश्रो एनएफडीसी अवार्डमा करिश्मा र रमेशले स्टेज शेयर पनि गरेका थिए ।
ब्रासलेट घोषणा कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखेर फर्के लगतै करिश्माले रमेशलाई हात मिलाउँदै बधाई दिइन् । रमेश पनि करिश्माको छेउमा नै आएर बसे । भलै करिश्माले रमेशलाई आफ्नै फिल्मबाट कमब्याक गराउन त सकिनन् तरपनि उनले रमेशलाई फिल्म क्षेत्रमा फेरि जमाउनका लागि कोशिश भने गरिरहेकी छिन् ।
उमेर ४५ पुगेपछि नायिका करिश्मा मानन्धर सधैं जवान देखिन्छिन् । ड्रेसिङमा त उनी अझ टिनएजर जस्तो देखिने गरेकी छिन् ।
केही वर्षअघि छातीमा गुलाफको टाटु खोपेर चर्चा बटुलेकी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ग्लामरस भएर उपस्थित हुने गर्दछिन् । कतिपयले उनको ड्रेसअपलाई अभद्र र अश्लील भनेर समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
सोमबारको एउटा कार्यक्रममा पनि उनको ड्रेसअपप्रति धेरैले नकारात्मक टिप्पणी गरे । भिएलसिसीले खोलेको फिटनेस सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रममा नायिका मानन्धर अश्लील ड्रेसअपमा उपस्थित भएको भन्दै केहीले आलोचना गरेका छन् । कार्यक्रममा उनी वान पिसमा उपस्थित भएकी थिइन् ।